Cunto Karis Shukulaatada Cunto + Casharo Video ah - Keega
Dhimashada Cake Shukulaatada
The dhimashada keeg shukulaato ah waa keegga ugu fiican ee jecel shukulaatada ugu dambeysa. Tani waxay soo bandhigeysaa seddex lakab oo dabiici ah, keega qoyan oo leh qaybo waaweyn oo shukulaato ah. Kadibna waxaa lagu dhejiyay nal iyo qalafsan shukulaatada fudud ee buttercream iyo a shukulaatada ganache faleebo . Waa jannada shukulaatada ah (Hel? Maxaa yeelay waxaad u dhimatay haha) qaniin kasta!
Keegani wuxuu helaa muuqaalkiisa cajiibka ah iyo dhadhanka weyn ee ka yimaada mugdiga, biirka adag ee 'Guinness stout,' Budada kookaha ee Dutch-ka lagu farsameeyay , budada espresso, shukulaatada waaweyn, iyo xitaa majones yar yar! Tani waa gacmo hoose, keega ugu yaabka badan ee shukulaatada aan waligey shaqsiyan dhadhamiyay. Aad bay u qoyan tahay waxaan odhan lahaa waxay qarka u saaran tahay ahaansho sidoo kale qoyan Taasi ma waxbaa? Aad ayey uga buuxsantahay dhadhanka shukulaatada waa ficil ahaan fudge.
Markii ugu horreysay ee aan keeggan sameeyo, nuskii dhexe waxaan is idhi, 'ma jirto si aan mar labaad u sameeyo keeggan, aad buu u sii socdaa!' Laakiin markaa… waan dhadhamiyay. Aniguna waan dhintay. Waxaan u dhintey geeri shukulaato macaan ka dibna dib ayaa laygu celiyey mahadsanid si aan ugu galo qaniinyo labaad.
GEERIDA KOOXAHA KOOXAHA DADKA LOOGU TALAGALAY
Kahor intaadan bilaabin cuntadan, waxaan si weyn kugula talinayaa inaad dhex marto maaddooyinka si aad u hubiso inaad wax walba gacanta ku hayso. Waxaa jira maaddooyin laga yaabo inaadan gacanta ku haysan.
Had iyo jeer waxaa laygu weydiyaa wax ku saabsan bedelka markaa halkan ayaan ku qori doonaa.
Beer Madoow - Maya tani kama dhigi doonto keeggaaga khamri. Khamrigu wuu karsadaa laakiin dabeecadda jilicsan ee biirka waana dhadhan qoto dheer oo mugdi ah wuxuu ku darayaa TON dhadhan shukulaatada. Waad ku beddeli kartaa biirka qaxwaha qolka qolka ama biyaha. Haddii aad isticmaasho kafee, ka tag budada espresso. Waxaan doorbidaa isticmaalka Guinness biirka maxaa yeelay waxay horeyba uhelaysaa dhadhan ahaan sida shukulaatada!
Budada Espresso - Mar labaad, budada espresso kama dhigi doonto keeggaaga dhadhamin sida kafeega, kaliya waxay kordhisaa dhadhanka shukulaatada waana wax la yaab leh! Haddii aadan haysan budada espresso, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa isku darka kafeega degdega ah. Haddii aadan midkoodna heli karin ama aadan rabin inaad isticmaasho, iska daa laakiin aniga igu kalsoonow, keegga la'aantu ma fiicnaan doonto la'aanteed!
Budada kookaha ee loo yaqaan 'Dutch-process' - Budada kookaha ee dabiiciga ah sida Hershey’s waa alkaliin macnaheedu yahay waxay ubaahantahay wax sida soodhada oo kale si keega uu kor ugu kaco. Soodhada dubista ayaa ka tagi karta dhadhanka ka dib keegaaga haddii aad wax badan isticmaasho. Adoo adeegsanaya budada kookaha ee loo yaqaan 'dutch process', waxaan u isticmaali karnaa budada dubista si aan keegayaga uga dhigno mid kor u kaca oo lagu daro wax yar oo soodhaha ah oo dhadhan ah. Haddii waxa aad haysatid oo dhan yihiin Hershey’s badh budada dubista ku beddel soodhaha.
Majones - Waan ogahay inay u muuqan karto wax aan caadi aheyn in lagu daro mayo doolshadaada shukulaatada laakiin i aamin hadii aad rabto qoyan, mayo waa wadada loo maro! Mayonnaise waxaa laga sameeyaa ukun iyo saliid. Ukunta iyo saliida = qoyaan! Haddii aadan rabin inaad isticmaasho majones ama aadan haysan, waxaad ku beddeli kartaa saliid laakiin u isticmaal keliya kala badh inta ay le'eg tahay miisaanka, ama keeggaagu wuxuu noqon doonaa mid aad u saliideysan.
GEERIDA KOOXDA KOOXDA TALLAABO-TALLAABO
INTA AADAN BILAABIN - Soo qaado subaggaaga, Guinness, ukunta, iyo majones si heerkulka qolka u diyaarso inta ka hartay maaddooyinkaaga. Fiiri qoraalkayga qormada qolka jabsada maaddada heerkulka wixii faahfaahin dheeraad ah.
Natiijooyinka ugu fiican, isticmaal miisaanka cuntada si loo miisaamo maaddooyinkaaga. Ku beddelida qoddobkan koobabka waxay u horseedi kartaa guuldarro. Akhriso qoraalkeyga sida loo isticmaalo miisaanka wixii macluumaad dheeraad ah.
Talo-siin - Haddii aad ku sugan tahay Boqortooyada Midowday ka raadso Shipton mills keega jilicsan iyo burka cajiinka ama daqiiqda leh borotiin heerkiisu yahay 9% ama ka yar.
Tallaabada 1 - Kuleyli foornadaada ilaa 335º F / 168º C. Ku diyaari digsiyadaada keega keega goop ama sii daayo kale doorbidid digsi. Waxaan isticmaalay seddex 8 p keeg oo keega wareega ah laakiin waad ku waafajin kartaa qashinkan cabbir kasta oo cabir ah adoo isticmaalaya tayda kalkuleytarka kalkuleyta midig ka sarreeya kaarka wax lagu karsado ee ku yaal salka hoose ee qoraalkan baloogga. Ikhtiyaar: Ku dhaji santuuqa hoose santuuqa waraaq si aad uga hortagto inaad ku dhegto shukulaatada.
Tallaabada 2 - Koob weyn oo lagu cabbiro ku dar biirka, budada espresso, iyo vaniljka. Iskusoo wada duuboo.
Tallaabada 3 - Baaquli weyn, ku sifee budada keega, budada kookaha, cusbo, budada dubista, iyo soodhaha.
Tallaabada 4 - Ku rid subagga jilicsan ee baaquli ku dhexjiro miisaska leh lifaaqa suufka. Kareemka dhexdhexaadka ah illaa uu ka siman yahay oo dhalaalayo. Qiyaastii 30 ilbiriqsi.
Tallaabada 5 - Mashiinka oo hooseeya, si tartiib tartiib ah ugu saydhaa sonkorta. Isku qas dhexdhexaad dhexdhexaad ah ilaa isku darku ka jilicsan yahay oo u dhow cad. Qiyaastii 3-5 daqiiqo.
Tallaabada 6 - Xawaaraha hoos ugu dhig hoos. Ukuntaada mar ku dar. Ukunta u oggolow inay si buuxda u dhex gasho ka hor intaadan ku darin ukunta xigta si looga fogaado inay jabiso burburkaaga.
Tallaabada 8 - Marka xigta ku dar qolkaaga qumbaha majones iskuna qas ilaa inta la isku darayo.
Talo-siinin - Haddii baytarigaagu jaban yahay (curdled eegaya) keeggaaga si hagaagsan uma kici doono waxaadna ka heli doontaa lakabka cirridka aan la karin ee hoose ee keegaaga. Markaa aad ayey muhiim u tahay in la hubiyo in ukuntaada, mayo, biirka iyo subagga ay yihiin dhammaan heerkulka qolka ama xitaa tad diiran si ay si sax ah isugu daraan.
Tallaabada 9 - Isku darka miisaanka hooseeya, ku dar 1/3 waxyaabahaaga qallalan isku dar ilaa inta la isku darayo. Ku dar 1/3 maaddooyinka dareeraha ah. Weelka xoq. Ku celi hawsha laba jeer oo dheeri ah illaa wax walba la isku daro.
Tallaabada 10 - Isku qas jukulaatadaada ama shukulaatada la jarjaray dhamaadka. Qeybahaas shukulaatada ahi waxay geerida ku qaataan keegga shukulaatada dusha sare waxayna ka dhigaan shukulaato-y heer sare ah (taasi erey ma tahay?)
Talo-siin –Isticmaalka shukulaatada jar jaran ama shukulaatada yar yar ayaa ugu fiican, jukulaatada caadiga ah aad ayey u weyn tahay waxayna ku degaysaa gunta salka.
Tallaabada 11 - U qaybi baytarigaaga doolshaada digsiyadaada aad diyaarsatay (Waxaan jeclahay isticmaalka sii deynta digsiga guriga lagu sameeyo, keega goop ). Waxaan isticmaalayaa seddex 8 ″ x2 ″ keeg oo waxaan isticmaalay miisaan si aan u hubiyo in digsi kastaa uu ku dhex jiro wax leeg oo isku mid ah sidaa darteed waxaan helayaa xitaa lakabyo. Gebi ahaanba ikhtiyaari ah haha!
Tallaabada 12 - Waxaad ku karisaa 335º F / 168º C illaa 40-45 daqiiqo (waqtiyada wax lagu dubo way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran cabbirka digsiga aad isticmaasho) illaa cadayga uu si nadiif ah uga soo baxo laakiin xoogaa jajab ah oo dheg dheg ah leh. Ha badin dubista.
Tallaabada 13 - Keegaaga ha ku qaboojiso weelka ilaa 10-15 daqiiqo. Ku tuur digsiyada weelka siligga oo si buuxda u qabooji.
Talo-siinin - Si aad si fudud uga saarto keega digsiga, dhig santuuqa qaboojinta dusha digsiga yar ee diirran. Isku wada hay digsiga keega iyo sariirta qaboojinta gacmahaaga, mid korka ah, midna kan hoose. Diid digsiga keegga iyo sariirta qaboojiyaha oo labadoodaba hoos u dhig markaa digsiga keega ayaa haatan saaran dusha sare ee qaboojiyaha. Digsiga kor u qaad.
Tallaabada 13 - Markaad qaboojiso, si tartiib ah ugu duub duub caag ah oo qabow illaa ay keegyadu ka adag yihiin inay la qabsadaan. Waxaad ku shubi kartaa qaboojiyaha qaboojiyaha saacad haddii aad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u qaboojiso.
FUDUD SHAKHLIGA SHAQADA TALLAABO-TALLAABO
Waxaan go aansaday inaan cusbooneysiiyo qabowga markii hore dhimashadayda ku qaatay keegga shukulaatada maxaa yeelay keegga horeyba wuxuu u lahaa tallaabooyin aad u badan, maxaa dhaxanta uga dhigay mid aad u adag Asal ahaan tan waxaan u haystay farmaajo shukulaato ah oo dhalaalaya tan laakiin markasta oo aan naftayda u sameeyo (taas oo inta badan ah) Kaliya waxaan sameeyaa shukulaatada fudud buttercream iyo shukulaatada ganache faleebo!
Ha welwelin, haddii aad weli rabto inaad sameysid jiiska kareemka kareemka shukulaatada, waad awoodi kartaa! Kaliya ku dar 1/4 koob sonkor budo ah ama 1/4 ganache shukulaato ah (waxaad u isticmaali kartaa hadhaaga haraagaaga faleebada) oo ku dar si joogto ah kariimka qaboojiyaha qaboojiyaha .
Tallaabada 1 - Ku dar ukunta cad ee la kariyey iyo sonkorta budada ah weelka dhajiskaaga istaaga. Isku qas si hoose 30 ilbiriqsi si aad isugu darto.
Tallaabada 2 - Ku dar budadaada kookaha la miiro, milix iyo soosaarida vanilj. Ka dib xawaaraha ilaa sare.
Tallaabada 3 - Ku billow inaad ku darto subaggaaga jilicsan qaybo yaryar oo ish ah. Qiyaas ahaan baaxadda weyn ee marshmallow illaa intaad ku dartay dhan.
Tallaabada 4 - Sii wad inaad u karisid karbaashkaaga subagga badan ilaa ay ka noqonayso mid fudud oo kareemo leh oo dhadhaminaya sida jalaatada shukulaatada. Tani waxay qaadan kartaa 10-15 daqiiqo ama wax ka badan iyadoo kuxiran xoogga makiinadaada ama haddii subaggaagu uu qabow yahay. Haddii ay weli dhadhamayso sida subagga, sii wad karbaashka!
Talo-siin - Haddii subaggaagu uusan isku qasmin, waxaa laga yaabaa inuu aad u qabow yahay. Ka soo saar 1 koob oo ah isku darkaaga buttercream-ka oo ku buuxi microwave 15 - 30 ilbidhiqsi illaa uu KALIGU dhalaalay. Ma kululaado! Waxaad ku dhex shubtaa isku darkaaga buttercream wayna ka caawin doontaa inay isku soo dhawaato.
TILAABADA QODOBKA GANACHE EE TALLAABADA
Tallaabada 1 - Microwave shukulaatadaada 30 ilbiriqsi si aad u kululeyso
Tilaabada 2 - kululee kareemkaaga culus ilaa uu ka bilaabmayo inuu liqo. Kariimkaaga ha karkarin ama waxay sababi doontaa in faleebadaadu kala dillaacdo. Ka baro wax badan oo ku saabsan samaynta ganache kaamil ah halkan.
Tilaabada 3 - Ganacsigu ha u qaboobo 90ºF ka hor intaadan daadin. Caadi ahaan waxaan sameeyaa faleebo yar kahor intaanan bilaabin qaboojiyaha keega. Waqtiga aan dhammeeyo jaakadda jajabka ah iyo jaakadda ugu dambeysa ee subagga, faleebada ayaa diyaar u ah in la isticmaalo.
GEERIDII GOLAHA SHAQADA COL
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida loo sameeyo keegaaga ugu horreeya tallaabo tallaabo, u hubi my sida loo sameeyo casharkaaga keega ugu horeeya .
Tallaabada 1 - Ka dib marka keegaagu uu qaboobo oo uu qaboojiyo si ay u fududaato in la maareeyo, ku jar korkyada mindi isku dhafan si aad u barbar dhigtid.
Tallaabada 2 - Dhig lakabkaaga ugu horreeya ee keega dusha dusha dushaaga keega ama dusha saxankaaga keega ah. Buuxi subagga la kariyey. Waxaan jeclahay inaan aado qiyaastii 1/4 ″ oo dhaxan ah. Iskuday oo heerkulka barafka ku hayso oo leh spatula. Ku celi lakabka xiga.
sida loogu qurxiyo keeg ubax cusub
Tallaabada 3 - Ku dabool keegga oo dhan maro khafiif ah oo ah buttercream. Tan waxaa loo yaqaan jaakad jajaban waxayna ku xirmi doontaa jajabkaas! Kadib keegga barafee 20-30 daqiiqo si aad u dejiso subagga caanaha.
Tallaabada 4 - Codso lakabka ugu dambeeya ee buttercream oo si siman ugu nadiifi xajmiga ama spatula-kaaga. Ka sarreysa dusha sare adigoo adeegsanaya spatula-kaaga.
Tallaabada 5 - Keeg dib ugu celi qaboojiyaha muddo 15 daqiiqo ah ka hor intaadan faleebada sameyn.
Tallaabada 6 - Dhig ganache-gaaga qaboojiyaha ah boorso dhuunta ka garee caaradda. Godka ha ka weynaanin. Hal faleebo ku daadi dhinaca keega la qaboojiyey si aad u hubiso in aanu aad u dhibayn. Hadday sidaas tahay, waxay noqon kartaa mid aad u kulul oo u baahan in la qaboojiyo ka hor intaadan faleebada samayn.
Tallaabada 7 - Waxaan u isticmaalay subagayga hadhay iyo ganache inaan ku wareego xoogaa keega dushiisa keeg boorso kale iyo 1M caarada dhuumaha.
Kaliya fiiri keeggaas quruxda badan! Haddii aad la kulmi doonto dhimasho shukulaatada, tani waa habka loo sameeyo! In kasta oo faleebada iyo cirifku yihiin kuwo fudud, haddana waxay u muuqdaan kuwo qurux badan!
Talo-siin - Marwalba waxaan ku hayaa keega qabow ee qaboojiyaha. Qabowgu wuxuu u dhaqmaa sidii caqabad wuxuuna keega ka dhigayaa mid cusub laakiin WELIGAA ha u adeegin keeg qabow. Keegga qabow wuxuu dhadhamiyaa aad u qalalan maxaa yeelay subagga ayaa qabaw. Markasta keegaga kala soo bax qaboojiyaha dhowr saacadood ka hor intaadan u adeegin. Xitaa waxaan aaday ilaa microwaving jeexjeexa keega 10 ilbiriqsi haddii ay aad u qabow tahay.
MA MIYAAN AHAY IN AAN ISTICMAALO DUWASHA CAKE?
Cuntadani waa haa. Daqiiqda keega waa bur yar oo borotiin ah oo ka dhasha horumarka gluten ka yar inta lagu jiro marxaladda kareemada dambe. Ma sameyn kartid khiyaanada burka / galleyda ama keegga ayaa isku qasmi doona oo dhadhamin doona sida rootida hadhuudhka.
MA KA TAGI KARAA MAAYNAHA?
Waxaan kuu balan qaadayaa keeggaagu inuusan dhadhamin doonin sida dhayo! Waxay kudareysaa qoyaan badan keegga shukulaatada ee uumigaas ku dhagan dushaaga fargeetada. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa yogurt griig caadi ah ama labeen dhanaan, laakiin dhadhanka isku mid ma noqon doono.
MAXAAN SAMAYN KARAA BEER?
Waxaad isticmaali kartaa biyo ama kafee. Guinness wuxuu sii xoojiyaa dhadhanka shukulaatada hodanka ah, kama dhigayo keegga dhadhanka sida biirka oo khamriga oo dhan ayaa karsada.
WAA MAXAY POWDER ESPRESSO?
Budada Espresso waxaa badanaa loo isticmaalaa dubista si loo soo saaro dhadhanka shukulaatada. Waxaa laga sameeyaa digirta kafeega ah ee la kariyey, la qalajiyey, laguna shiiday budo wanaagsan. Way ka xoog badan tahay kafeega degdegga ah laakiin kuma dari doonto wax dhadhan kafee ah keegaaga.
Waad awoodaa iskaa u gaar ah budada espresso, ama ku beddel qaxwaha qaxwada degdegga ah ee madow. Keeni mayso isla taajir, dhadhan la dubay, laakiin waxay samayn doontaa khiyaanada haddii aad ku dhegto.
DUTCHED MADAXA BULSHADA VS REGULAR
Budada kookaha ee Dutch-ka lagu farsameeyay iyo budada kookaha dabiiciga ahi isku mid maaha. Nederland-ka la warshadeeyay waxaa lagu daaweeyaa alkali si looga takhaluso aashitadiisa, taasoo ka dhigeysa inay yeelato dhadhan adag iyo midab madow, oo ku dhow madow. Haddii aadan heli karin Dutched, waxaad u isticmaali kartaa budada kookaha caadiga ah halkii.
Jacaylka dhimashada doolshada shukulaatada? Hubi cuntooyinkan kale ee loogu talagalay kuwa jecel shukulaatada!
QAARISKA LA XIRIIRA
Cunto kariska shukulaatada aan ugu jeclahay
Cunto karis shukulaato seddex ah
Shukulaatada kareemka shukulaatada ah
Keeg shukulaato fudud
Dhimashada keegga shukulaatada waa riyo shukulaatada jecel! Keegani wuxuu kahelaa dhadhankiisa shukulaatada daran Guinness beer, majones, budada espresso iyo jukulaatada yaryar. Oo lagu lammaaneeyo shukulaatada fudud ee fudud iyo faleebo ganache ah oo hodan ah, waxaa laga yaabaa inaad dhimatay laakiin waad ku farxi doontaa! Keegga shukulaatada ah ma ahan mid qalbi jilicsan! Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:40 daqiiqado Wadarta Waqtiga:1 saac Kalori:1881kcal
▢14 oz (397 g) Beer adag Sida Guinness (Heerkulka Qolka)
▢1 1/2 Tbsp (1 1/2 Tbsp) Budada Espresso
▢laba tsp (laba tsp) Real Vanilla
▢14 oz (397 g) Daqiiqda Cake
▢1 tsp (1 tsp) Budada dubista
▢laba tsp (laba tsp) Fixiso
▢1 1/2 tsp (1 1/2 tsp) Cusbo
▢6 oz (170 g) Budada Kookaha la duubay
▢10 oz (284 g) Subag aan cusbo lahayn Heerkulka Qolka
▢16 oz (454 g) Sonkorta dahaaran
▢4 Weyn (4 Weyn) Ukunta Heerkulka Qolka
▢6 oz (170 g) Majones Heerkulka Qolka
▢6 oz (170 g) Jalaatada shukulaatada yaryar
▢16 ounces (454 g) subag aan cusbo lahayn jilicsan heerkulka qolka
▢laba ounces (57 g) budada kookaha sifeeyey
▢1 Miisaska cuntada soosaarida vanilj
▢8 oz (227 g) Shukulaatada Semi-macaan
▢4 oz (113 g) Kareem culus
FIIRO GAAR AH: WAA MUHIIM IN dhammaan waxyaabaha heerkulka qolka ee kor lagu soo sheegay ay yihiin heerkulka qolka oo aan qabow ahayn si maaddooyinka ay isugu milmaan oo ay si sax ah isugu daraan.
Foornada kuleylka illaa 335º F / 168º C. Diyaarso digsiyo keeg ah oo leh keega ama nooc kale oo la sii daayo. Waxaan isticmaalay seddex 8'x2 'oo keeg wareegsan ah. U adeegso kalkuleytarka rootiga kalkuleylka ka sarreeya kaarka kariska si aad ugu hagaajiso habka loo karinayo cabbirka keeggaaga. Ikhtiyaar: Ku dhaji santuuqa hoose santuuqa waraaq si aad uga hortagto inaad ku dhegto shukulaatada
Koob weyn oo lagu cabbiro ku dar biirka, budada espresso iyo vanilj. Wada xoq oo dhinac iska dhig.
Baaquli weyn, ku sifee bur, budada kookaha, cusbo, budada dubista iyo soodhaha oo dhinac iska dhig.
Ku rid subagga jilicsan ee weelka dhalada isku dhafka ah oo ku lifaaqan lifaaqa suufka. Kariim ilaa ay ka siman yihiin oo dhalaalayaan. Iyada oo mashiinka hooseeya, si tartiib tartiib ah ugu saydhaa sonkorta. Isku qas heerka sare ilaa isku darku ka jilicsan yahay oo u dhow cad. Qiyaastii 3-5 daqiiqo.
Xawaaraha hoos ugu dhig hoos. Ku dar ukuntaada (ROOM TEMP) midkiiba markiiba. Ukunta u oggolow inay si buuxda u dhex gasho ka hor intaadan ku darin ukunta xigta si looga fogaado inay jabiso burburkaaga. Kudar maayadaada iskuna qas ilaa intaad iskudarayso.
Iyada oo isku darka hooseeya, ku dar 1/3 waxyaabahaaga qalalan iskuna qas illaa inta la isku darayo. Ku dar 1/3 maaddooyinka dareeraha ah. Ku celi hawsha laba jeer oo dheeri ah illaa wax walba la isku daro.
Isku laab jajabyada shukulaatada yar yar waxaadna u qeybisaa doolshaha keega digsiyadaada keega. Dub ilaa 40 - 45 daqiiqo ilaa cadayga uu si nadiif ah uga soo baxayo laakiin xoogaa jajab ah oo dheg dheg ah leh. Ha badin dubista.
Keegaagu ha ku qaboojiyo digsiga ilaa 10-15 daqiiqadood ka hor inta aanu u soo jeesan duub qaboojiyaha. U oggolow si buuxda u qabow ka dibna si tartiib ah ugu duub duub caag ah oo qabow ilaa ay keeggu ka adag yihiin in la maareeyo. Waxaad ku shubi kartaa qaboojiyaha qaboojiyaha haddii aad u baahan tahay inaad si dhakhso leh u qaboojiso.
Si tartiib ah u wada qabooji sonkorta budada ah iyo budada kookaha si aad uga saarto wixii kuuskuus ah.
Ku rid ukunta cad, sonkorta budada ah iyo budada kookaha ee weelka baaqigaaga qaso
Kusoo lifaaq buskudka, isku dar maaddooyinka si hoose ka dibna kor ugu karbaash 5 daqiiqo.
Ku dar subaggaaga jilicsan ee guntimaha ku jira. Ku dar vanilj iyo milix. Ku soco kor ilaa ilayska iyo khafiifka.
Ikhtiyaari ah: U beddelo lifaaqa suufka oo isku qas qun yar illaa 15-20 daqiiqadood si aad u sameysid subagga qulqulaya oo aad uga saarto goobooyin hawo ah.
Microwave shukulaatadaada 30 ilbiriqsi si aad u kululaato
Kariimka kuleylka ah kuleylka kuleylka dhexdhexaadka ah illaa iyo inta uu bilaabmayo inuu karkariyo. Ha karkarin. keeg la qaboojiyey.
Shub shukulaatada oo fadhiiso 5 daqiiqo. Hoos u dhig ilaa inta uu ka siman yahay. Haddii aad buurbuur leedahay, baaquli dhig microwave 30 ilbidhiqsi oo ku shub. Ganache ha u qaboojiso illaa 90º (si diirran u taabashada). Dhig ganacheega boorsada tuubada oo ku shub dusha sare ee keegaaga qabow iyo qabow.
1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa in yar oo diiran (ukumo, biir, mayo, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebin ama uusan xannibeynin. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga ka hor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey ee xiisaha leh haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isku dhejinta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si loogu qaado gaadiid fudud. Wax badan ka baro qurxinta keeggaaga ugu horreeya. 5. Haddii cuntada lagu kariyo ay ku baaqeyso waxyaabo gaar ah sida burka keega, lagu beddelo bur dhan iyo ujeeddada laga sameeyay hadhuudhka laguma talinayo haddii aan lagu caddeyn karinta inay caadi tahay. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. Dhammaan ujeeddada burku waa bur caadi ah oo aan lahayn wakiilo kacaya. Waxay leedahay heer borotiin ah 10% -12% Daqiiqda Keeg waa daqiiq jilicsan, oo bur ah borotiin ka yar 9% ama ka yar.
Ilaha burka keegga: Boqortooyada Midowday - Shipton Mills Cake & Burka cajiinka 6. Waxaan had iyo jeer ku hayaa keega qabow qaboojiyaha. Qabowgu wuxuu u dhaqmaa sidii caqabad wuxuuna keega ka dhigayaa mid cusub laakiin WELIGAA ha u adeegin keeg qabow. Keegga qabow wuxuu dhadhamiyaa aad u qalalan maxaa yeelay subagga ayaa qabaw. Markasta keegaga kala soo bax qaboojiyaha dhowr saacadood ka hor intaadan u adeegin. Xitaa waxaan u aaday microwaving jeexjeexa keega 10 ilbiriqsi haddii ay aad u qabow tahay. 7. Waxaad ku badali kartaa Guinness-ka ku jira cuntadan nooc kale oo biir adag ama biyo heerkulka qolka ama kafee ah, laakiin isku dhadham ma yeelan doonto. 8. Waxaad ku beddeli kartaa mayo ku jirta qoddobkan yogurt-ka heerkulka giriigga ama labeen dhanaan, laakiin ma lahaan doono dhadhan isku mid ah.
U adeegida:8ounces|Kalori:1881kcal(94%)|Kaarboohaydraytyada:199g(66%)|Protein:labaatang(40%)|Dufan:119g(183%)|Dufan Dufan:66g(330%)|Kalastarol:324mg(108%)|Sodium:1282mg(53%)|Kaliumperyamper:806mg(2. 3%)|Fiber:13g(52%)|Sonkor:137g(152%)|Vitamin A:2845IU(57%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:161mg(16%)|Bir:7mg(39%)
sida loo jazz ilaa iskudhafan keega jilicsan ee jilicsan
samee dhadhanka isku darka keega sida keega oo kale
sida loo sameeyo keeg qoyan
sida loo sameeyo isku darka keega la kariyey ee dhadhanka guriga lagu sameeyo
sida ugu fiican ee loo karinayo keega cad